हामी कस्तो समाजको परिकल्पना गर्दैछौं, मेनुका थापाको जस्तो कि स्मिता थापाको जस्तो? | Suvadin !
सबैले सोधौं, नारीले सुरक्षा कहाँ पाउँछन्?
हो, व्यक्तिले जस्तो जीवन बाँच्न चाहन्छ, पाउछ। त्यो उसको अधिकार हो। स्थिता थापाले आफूले चाहेजस्तो जीवन बाँच्न पाउँछिन्। तर, प्रश्न कस्तो जीवन बाँच्ने मात्रै होइन, हामी हाम्रो समाज कस्तो बनाउँछौं भन्ने पनि हो। हाम्रो सामाजिक दायित्व के हो भन्ने पनि हो। र, प्रश्न एक जना चर्चित कलाकारले आफूजस्तै महिलाका लागि गर्नुपर्ने के हो भन्ने पनि हाे।
Nov 15, 2017 20:40
रक्षा नेपालकी संस्थापक मेनुका थापा र माेडल स्मिता थापा।
Shared: 647 times | Share this on
उकिता दाहाल, काठमाडौं, कात्तिक २९ – हामी कस्तो समाजको परिकल्पना गर्दैछौं? मेनुका थापाको जस्तो कि स्मिता थापाको जस्तो? यो आदेखको शुरुवात प्रश्नबाटै गरेँ। हो, यो समाजका हिंस्रक प्रवृत्ति बोकेका दरिद्रहरुसँग लड्दै आएकी नेपाली समाजकी एक आदर्श नारी मेनुका थापाको पक्षबाट हेर्ने कि! सुन्दरता र सुरामा मधमस्त भएर मनोरञ्जनमा रमाउने स्मिता थापाको जस्तो? यो समाज कस्तो बनाउने?
हामी नारीलाई देवीका रुपमा पूजा गर्ने समाजमा बाँचिरहेका छौं। दशैंतिहार भर्खरै सकियो। दशैंमा नारीकै प्रतिमा नवदुर्गाको पूजा भयो। तिहारमा लक्ष्मीको पूजा भयो। हो, तस्वीर तथा माटो र धातुले बनेका धेरै प्रतिमाको पूजा गरियो।
तर, प्रतिमा र तस्वीरहरुको पूजा गर्दैगर्दा ज्यूँदा देवीहरु चाहिँ यो समाजमा कति सुरक्षित छन् भन्ने कुराको हेक्का कसैलाई भएन। भयो त केबल तस्वीर अनि माटो र धातुले बनेका प्रतिमाको पूजा! यो पूजा केबल नामका लागि मात्रैको पूजा थिएन। पुष्प र रङ्ग चढाउने पूजामात्रै थिएन।
यदि गहिराईबाट सोच्ने हो भने यो पूजा समस्त नारीहरुको सुरक्षा र मातृत्वप्रतिको अथाह प्रेम थियो। तर, पूजा गर्नेले पूजा गरे, काम सकियो। भोलिपल्टै देखि फेरि शुरु भयो, नारीमाथि असुरक्षा।
आज यही समाजमा यौनपिपासु र नरभक्षीहरुका गिद्धेदृष्टिबाट जोगिएर हिँड्नुपर्ने विवशताका माझ हामी बाँचिरहेका छौं। कतिपय दिदीबहिनी त्यस्ता राक्षसी प्रवृत्ति भएकाहरुसँग पराजित हुनुपरेको छ।
धनकुटाकी १४ वर्षीया बालिका पनि बलात्कार शिकार भएकी छिन्। कात्तिकमा मात्रै एक दर्जन जति कुकृत्यका घटना भएका छन्।
पर्सा वीरगञ्जको सखुवाप्रसौनीमा बलात्कृत एक बालिका अहिले पनि अस्पतालको शैयामा छिन्। अत्यधिक रक्तश्रावले उनको अवस्था नाजुक बनिरहेको छ। न्याय माग्दा उनकी आमा र भाउजुको हात भाँचियो। अपराधी सखुवाप्रसौनी वडा नम्बर–४ को वडा अध्यक्षको छोरा रहेछन्। उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई महाभारत बनिरहेको छ।
त्यसैगरी, धनकुटाकी १४ वर्षीया बालिका पनि बलात्कार शिकार भएकी छिन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार कात्तिक महिनामा मात्रै एक दर्जन जति कुकृत्यका घटना भएका छन्। यौनप्रति कति विक्षित छ हाम्रो समाज भन्ने दृष्टान्तको प्रमाण यति नै पर्याप्त छ।
राज्यले पनि मेनुकाहरुको आवाज दबाउन सक्दैन। बाध्य भएर अपराधीहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँछ।
सामाजिक मनोविज्ञान र यर्थाथ
बालिका बलात्कारका घटना थाहा पाउने बित्तिकै रक्षा नेपालकी संस्थापक तथा अध्यक्ष मेनुका थापा न्यायका लागि उठ्छिन्। सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट अपराधीलाई कारबाही गराउन दबाब अभियानमा लाग्छिन्।
र, राज्यले पनि मेनुकाहरुको आवाज दबाउन सक्दैन। बाध्य भएर अपराधीहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउँछ सरकारले। यो भयो समाजको कुरा, राष्ट्रको कुरा, नारी सुरक्षाको कुरा।
तर, त्योभन्दा अलि फरक, ठाक्कै ९० डिग्रीको फरकमा एउटा यस्तो समाज छ, त्यहाँ यस्ता पात्र पनि छन्, जसलार्इ यी घटनाकाे रत्तिभर वास्ता छैन। जसलाई न यो समाजको चिन्ता छ, न त नारी सुरक्षाको नै।
हो, व्यक्तिले जस्तो जीवन बाँच्न चाहन्छ, पाउछ। त्यो उसको अधिकार हो। स्थिता थापाले आफूले चाहेजस्तो जीवन बाँच्न पाउँछिन्। तर, प्रश्न कस्तो जीवन बाँच्ने मात्रै होइन, हामी हाम्रो समाज कस्तो बनाउँछौं भन्ने पनि हो। हाम्रो सामाजिक दायित्व के हो भन्ने पनि हो। र, प्रश्न एक जना चर्चित कलाकारले आफूजस्तै महिलाका लागि गर्नुपर्ने के हो भन्ने पनि हाे?
वीरगञ्जमा विशाल प्रदर्शन भइरहेको थियो। यता स्मिताको फेसबुकमा ‘आकर्षक’ फोटो पोस्ट भयो। आफ्नो तस्वीरमा केही पुरुष मित्रहरुको ‘आकर्षक’ कमेन्ट पाएपछि स्मिताले ‘स्माइल साइन’ले सहमति जनाइन्।
वीरगञ्जमा विशाल प्रदर्शन भइरहेको थियो। यता स्मिताको फेसबुकमा ‘आकर्षक’ फोटो पोस्ट भयो। आफ्नो तस्वीरमा केही पुरुष मित्रहरुको ‘आकर्षक’ कमेन्ट पाएपछि स्मिताले ‘स्माइल साइन’ले सहमति जनाइन्। यो सवाल कमेन्ट वा कमेन्ट पछि स्मिताको प्रतिक्रियाको मात्रै होइन। यो समग्र मुलुकको चिन्तन र मनोदशाको पनि सवाल हो।
समाजको एउटा पाटो नारीको अश्मिताको रक्षाका लागि दिनरात जुटिरहेको छ भने अर्को पाटो नारीको अश्मितामाथि आक्रमणको खुला निम्तो दिँदैछ। होडबाजी नै छ।
नारीको देह र अश्मिता वस्तु होइन, गरिमा हो। मूल्यले किनबेच हुने साधन होइन, प्रकृतिको अमूल्य उपहार हो। समाज नारी बिना चल्न सक्दैन। तर, समाजको रुपान्तरण हुनुपर्ने बेलामा रुग्ण परिवेशतिर लम्किँदै गएपछि बोल्नै पर्ने स्थिति आउँदो रहेछ।
नारी भएर नारीको इज्जतको रक्षा गर्न नसक्नु र बलात्कारी राक्षसहरुको सिर्जनाको सहयोगी हुनु रुग्ण मनस्थितिको उपज हो। समाजमा खुलेआम सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘मेरो शरीर मेरो मर्जी’का नाममा आफ्नो देहको प्रचार गरी क्षणिक बाहबाही लुट्ने प्रयत्नमा लाग्नेहरुको पनि आफ्नै अधिकार छ।
हो, उनीहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरुन्, गर्न पाउँछन्। तर, यस्ता क्रियाकलापबाट अपराधको निम्तो दिनु चाहिँ पक्कै पनि सामाजिक कार्य होइन। सर्वथा निन्दनीय काम हो।
यो समाजमा खाँचो चाहिँ मेनुका थापालाई मात्रै छ। लड्ने मेनुका नै हुन्छिन्। बोल्ने मेनुका नै हुन्छिन्। समाजलाई खबरदारी गर्ने र नारीका पक्षमा आन्दोलन उठाउने मेनुकाहरु नै हुन्छन्।
लड्ने लडिरहेका छन्। तर, अपराधी खुलेआम छन्। अनि देश मौन छ, चुपचाप सुनिरहेकाे छ। करिब तीन करोड जनताको भीडमा न्यायका पक्षमा लड्ने भनेका औँलामा गन्न मिल्ने मात्रै छन्।
हाम्रो मनोदशा यसरी विकृत भएको छ कि, के सही हो, के गलत, थाहै हुँदैन। मानौं, उसलाई यसबारे खबर नै छैन। सुन्नेहरु कान बन्द गर्दैछन्। देख्नेहरु आँखा बन्द गर्दैछन्। यो बजारमा राक्षसहरुको राज छ। दलालको धन्दा मौलाइरहेको छ। व्यापारीहरु फाइदैफाइदामा छन्, लुट्नै तल्लिन छन्। पीडितहरु चिच्याइचिच्याई रुँदैछन्। अनि सरकारमा र प्रशासनका कुर्सीमा ज्यूँदा लासहरु छन्।
फेरि प्रसंगमा आऔं, स्मिता थापा स्वेच्छाले नारी अश्मिताको धज्जी उडाइरहेकी छिन्। उनलाई मनोरञ्जन प्यारो छ। तर, जीवनको अर्को पाटो पनि छ, जीवनको अर्को मूल्य पनि छ। सोचे राम्रो। विचार गरे राम्राे।
तपाई बेखबर हुनुहुन्छ, अबको निशाना कतै तपाई नै त होइन? तपाईकै छोरी, दिदीबहिनी, आमा, सानिमा, नन्दभाउजु त अपराधीहरुको निशानामा परेका छैनन्? आफ्नो पालो पर्खेर नबसौं।
सृष्टिकी मूलसर्जक नारीको अस्तित्व बँचाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट उठौं। मेनुका थापाहरु जस्ता समाजसेवी, स्वयमसेवीहरुलाई प्रोत्साहन गरौं। गलत प्रवृतिलाई निर्मूल पारौं। अपराधीलाई सजाय दिन सरकारलाई जगाउने हाम्रै दायित्व हो।